Ngaba uMongameli wayeneNcwadi yokuThengisa iiRekhodi zakhe zobuqu?
UBarack Obama watyikitya iSigqeba soLawulo esingu-13489 ngoJan 21, 2009, ngolunye usuku emva kokuba ufungelwe njengoMongameli we-44 we-United States . Ukuva ukuba i-theorists yoqhinga ichaza oko, umyalelo wokuqala wokuqala ka-Obama uvale ngokusemthethweni amarekhodi akhe ebantwini, ingakumbi isatifikethi sakhe sokuzalwa . Yintoni le nto ijolise ukuyenza?
Enyanisweni, umyalelo wokuqala wokulawula u-Obama unomnqophiso ohambelanayo.
Injongo yalo yayikubonisa ukukhanya ngakumbi kwirekhodi likamongameli, kuquka neyakhe, emva kweminyaka eyisibhozo eyimfihlo eyabekwa nguMongameli uGeorge W. Bush.
Okokuqala I-Order Executive Executive yaseB Obama yathi
Iigosa ezilawulayo ziyimibhalo esemthethweni, elandelwa ngokulandelelana, apho uMongameli wase-United States ulawula imisebenzi yombuso karhulumente . Iimyalelo zolawulo zikaMongameli zifana nezikhokelo ezibhaliweyo okanye imiyalelo ekhishwe ngumongameli okanye i-CEO yekampani yecandelo labucala kwiiNtloko zeSebe.
Ukuqala noGeorge Washington ngo-1789, bonke abaongameli baye bakhupha iilawulwa ezilawulayo. UMongameli uFrank D. Roosevelt , usenalo iirekhodi zee-odolophu ezilawulayo, ebhalisa ama-3,522 phakathi neminyaka eyi-12 eofisini.
Umyalelo kaMongameli wokuqala we-Obama umyalelo wokulawula ukulandelwa kwamanqanaba angaphambili emva kokushiya iofisi.
I-order order now-13233, isayinwe nguMongameli uGeorge W. Bush ngomhla kaNovemba 1, 2001. Yavumela ukuba ngabaengameli kunye namalungu entsapho ukuvakalisa ilungelo elifanelekileyo kunye nokuvimba ukufikelela koluntu kwiirekhodi zeNdlu ze-White House malunga nasiphi isizathu .
Ukumisa i-Bush-Era Secrecy
Imilinganiselo kaBush yagxeka kakhulu kwaye inselele enkundleni.
Umbutho we-American Archivists othi ulawulo lukaBush lolawulo olupheleleyo "ukugqitywa ngokupheleleyo kwe-1978 yoMthetho weeRekhodi zoMongameli." UMthetho weeRekodi zoMongameli ugunyazisa ukugcinwa kweengxelo zikaMongameli kwaye zibenza zifumaneke kuluntu.
Obama wavumelana nokugxeka.
"Kwangoku ixesha elide ngoku, kubekho ukufihla okukhulu kwesi sixeko. Olu lawulo lusekwe kwicala elingenabo bafuna ukunqanda ulwazi kodwa nabo bafuna ukuba baziwa," kusho uB Obama emva kokusayina umyalelo wokumisa iBush isilinganiselo.
"Inyaniso nje yokuba unamandla omthetho wokugcina into eyimfihlakalo ayithethi ukuba ufanele ukuyisebenzisa rhoqo. Ukungaqiniseki kunye nokulawulwa komthetho kuya kuba ngamatye okuthintela kulo mongameli."
Ngoko umyalelo wokuqala wokulawula u-Obama akazange afune ukuvalela ukufikelela kwiirekhodi zakhe, njengokuba i-theorists yelenqe. Injongo yalo yayikuchasene-ukuvula iiRekhodi zeNdlu ze-White House kuluntu.
Igunya loLawulo oluLawulayo
Unokukwazi ukwenza ubuncinane ukutshintsha iindlela ezenziwa ngayo iCongress, imiyalelo yesigqeba soongameli inokuphikisana. Uphi umongameli afumana amandla okukhupha?
Umgaqo-siseko wase-US awunikeli ngokucacileyo imiyalelo yesigqeba.
Nangona kunjalo, iCandelo II, iCandelo 1, icandelo 1 loMgaqo-siseko likhankanya igama elithi "amandla alawulayo" kumongameli osekelwe ngokomgaqo-siseko ukuba "unakekele ukuba iMithetho iphunyezwe ngokuthembeka." Ngako oko, amandla okukhupha iilawulwa ezilawulayo anokutolika ngeenkundla njengamandla amongameli obalulekileyo.
INkundla ePhakamileyo yase-United States ibonise ukuba yonke imiyalelo yesigqeba kufuneka ixhaswe ngumhlathi othile okanye umThetho weCongress. INkundla ePhakamileyo inegunya lokuvimba amagosa alawulayo ukuba inqumle ukugqithisa imida yoMgaqo-siseko wegunya likaMongameli okanye ibandakanya imiba ekufuneka ilandelwe ngokomthetho.
Njengoko nazo zonke ezinye izenzo ezisemthethweni zamagatsha omthetho okanye alawulayo , imiyalelo yesigqeba iyaxhomekeka kwinkqubo yokuhlolwa komgwebo yiNkundla ePhakamileyo kwaye inokuguqulwa xa ifunyanwe ingekho mthethweni kummandla okanye kumsebenzi.
Indlela yokudibanisa isiNgesi esingaqhelekanga sesiFrentshi 'Dormir'
I-Penn State Behrend Admissions
Umthetho wesihlanu weBuddhist
Amaqiniso NgamaConch kunye neeShell zazo